Ciidamada DFS oo maanta mar kale howlgalo ka wada magaalada Muqdisho
January 15, 2013 - Written by
Muqdisho:-Ciidamada DFS ayaa maanta mar kale howlgalo ka sameeyey magaalada Muqdisho waxaana howlgaladaas lagu qabqabtay boqolaal dhalinyaro ah waxaana howlgalada saaka ay si culus uga socdaan degmooyinka Wadajir, Dharkiinley iyo Huriwaa .
Saraakiisha ciidanka DFS ayaa sheegay in howlgalada ay ku xoojinayaan amaanka magaalada Muqdisho ;sida uu saxaafada u sheegaya taliyaha ciidamada nabadsugida ee gobolka Banaadir Col. Khaliif Ereg waxaana uu sheegay in dadkii maanta ay qabteen ay sii daayeen badankood.
Howlgalada saaka ay qaadeen ciidanka DFS ayaa waxaa si wada jir ah u wada fuliyey ciidamada booliska, kuwa nabad sugida iyo ciidanka Melatariga ee DFS.
Taliyaha ciidamada nabadsugida ee gobolka Banaadir Col. Khaliif Ereg ayaa sheegay in howlgalada saaka ay ku qabteen dad gaaraya ilaa 1,714 qof waxaana haatan u xiran ciidanka DFS 114 qof oo laga soo qabtay degmooyinka Wadajir, Dharkiinley iyo Huriwaa .
Waa maalintii labaad oo ay howlgalka ka sameeyaan ciidanka DFS magaalada Muqdisho iyadoo shalay ay howlgal la mid kan saaka ay ciidamada DFS ka sameeyeen Degmooyinka Yaaqshiid iyo Huriwaa waxaana lagu soo qabtay dad gaaraya ilaa 137 qof .